Wasiir ku xigeenka Arrimaha Dibadda oo xarigga ka jaray dib u dayactir lagu sameeyay Waaxda Carabta | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiir ku xigeenka Arrimaha Dibadda oo xarigga ka jaray dib u dayactir...
Wasiir ku xigeenka Arrimaha Dibadda oo xarigga ka jaray dib u dayactir lagu sameeyay Waaxda Carabta
Wasiir ku xigeenka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Mr. Mukhtar Mahad Daud oo uu wehliyo Amb. Hamoud Samaran Al Jowhary Al Huwaidi Madaxa Ergada Jaamacadda Carabta ee Soomaaliya ayaa maanta xarigga ka jaray dib u dayactir iyo qalabayn lagu sameeyay xafiisyada cusub ee ay ku howlgali doonto Waaxda Carabta.
Agaasimaha Waaxda Carabta Mustafa Adam Dagaal ayaa ku soo dhoweeyay Madaxda kala duwan ee Wasaaradda qeybaha la dayactiray ee Waaxdiisa, isaga oo bogaadiyay dadaalka Jaamacadda Carabta ay ugu jirto taageeridda Soomaaliya.
Xoghayaha joogtada Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Danjire Cali Maxamed Cali ayaa sheegay in dib loo dayactiri doono, lana qalabayn doono waaxyaha kala duwan ee Wasaaradda oo uu ku jiro Machadka Daraasaadka Diblomaasiyadda, isaga oo xusay in Waaxyuhu isku fidin doonaan dhammaan dhismaha Wasaaradda, si loo xoojiyo howlaha shaqo iyo shaqaale.
Dhankiisa, Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Mudane Mukhtaar Mahad Daauud ayaa tilmaamay in Wasaaraddiisu ay la kaashan doonto Wasaaradaha kale ee dalka si loo suurageliyo dib u dhis ballaaran oo lagu sameeyo dhammaan hey’adaha qaranka ee ku burburay dagaaladii sokeeye.
Ergeyga Jaamacadda Carabta ee Soomaaliya Danjire Hamoud Al Huwaidi ayaa sheegay in Xoghayaha guud ee Jaamacadda Carabta Ahmed Aboul-Gheit uu qaban-qaabinayo shir ballaaran oo dhammaan dowladaha carbeed ay ka soo qeybgali doonaan oo lagu uruurin doono lacago dib loogu dhisayo dalka Soomaaliya, isaga oo qiray in Jaamacadda Carabta aanay marnaba ka gaabin doonin in ay ka shaqeyso sidii Soomaaliya ay dib uga soo kabsan laheyd dhibtii colaaduhu ay gaarsiiyeen.
Previous articleGuddoomiye Najax “Waxaan qorsheyneynaa inaan adeega dowliga ah gaarsiino goobaha lagala wareegay Al-Shabaab”
Next articleHorjooge ka tirsan maleeshiyaadka Shabaab oo isu soo dhiibay Ciidamada Xogga Dalka